alimina fanamafisana induction | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Alim-bodiakam-bozaka vita amin'ny alàlan'ny endriny
Tanjona: Hanasongadina singa misy alimina amin'ny 1050 ºF (566 ºC) ho an'ny fampiharana hafanana:
Fantsona AI (3/8 ″ /9.5mm)
Lucas-Milhaupt Zana-dohan-tariby 30-832
Temperatur 1050 ° F (566 ºC)
Fitaovana DW-UHF-10KW 150-500 kHz rafitra fanamafisam-peo fanamorana miaraka amina toby fivoahana hafanana izay misy kapila roa 1.5 μF.
Ny famolavolan'ny ovale fanindronana fanindronana roa, izay novolavolaina sy novolavolaina manokana ho an'ny fivorianana aliminioma
Ny famolavolan-kodiarana fanindronana fanindronana five-dolara dia natsangana sy novolavolaina manokana noho ny fiatrehana ny tobin'ny Cu ho an'ny fivorian'ny AI
Process Braze: natao ho an'ny fitambaran'ny alimo. Avy eo dia napetraka tao anatin'io fitambaran-trano io ireo tavoahangy alimo efatra ary napetraka tao amin'ny kodiarana ilay fivoriambe. Nihamafana nandritra ny segondra 70 ny fivoriambe, ka nahatratra ny hafanana voatondro ary nipoitra ny hafanana. Ho an'ny tobin'ny Cu, dia natao ho azy ireo koa ny endriny matevina, nanely ny rambony, ary napetraka tao anaty kodiarana ilay fivoriambe. Ny vanim-potoan'ny fiakaran'ny hafanana dia manodidina ny 100 segondra. Ny kofehy sasany dia nitaky ny famatsiana fitaovana mba hameno ny faritra manontolo noho ny haben'ny tady. Raha lava ny fotoana fiasan'ny fihodinana, dia hofoanana ny filana fiterahana.
Vokatra / tombom-barotra: Toetr'andro azo antoka sy azo averina:
Ny mpanjifa dia maniry ny fanafanana marimarina kokoa sy azo averina kokoa noho ny fanilo entin'ny fanilo, izay induction azony natao.
Fanaraha-maso ny mari-pana: Ny fampidiran-drivotra dia ahafahana mifehy tsara ny hafanana raha oharina amin'ny fomba hafa, anisan'izany ny afo, izay tian'ny mpanjifa
Sokajy Technologies Tags Alao ny alimina ho varahina, Induction Brazing Aluminium, fanodinana alim-bolamena, Induction fanolorana aliminioma